အသိအမြင်အသစ်: မာတင် Vrijland
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	မေလ 11 2017 အပေါ်	• 29 မှတ်ချက်
မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသတင်းအဓိကအားဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားမှာညွှန်ကြားထားစစ်ပွဲကိုအမေရိကန်ခြိမ်းခြောက်မှုမှလာမယ့်ပြင်သစ်ရွေးကောက်ပွဲများလှည့်။ ဒါကတိုင်းပြည် [ ... ] ကနျူကလီးယားလက်နက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်အမေရိကားကိုခေါ်လျှင်မလိုလားအပ်သောကြောင့်ရုတ်တရက်ဆိုးဆိုးရွားရွားအန္တရာယ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ပြန်ရမှကောင်းတစ်ဦးဆင်ခြေဆင်လက်
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	မေလ22016 အပေါ်	• 1 မှတ်ချက်
လူအတော်များများဟာသင် "စနစ်" ဆန့်ကျင်မနေသင့်ကြောင်းခံစားရပေမယ့်အထဲမှာနေတုန်းပဲအောင်မြင်မှုရရန်နည်းလမ်းရှာရပါမည်။ သင်ဆဲငွေရှာသို့မဟုတ်ကြောင်းမှုစနစ်အတွင်းတွင်မှလက်ရှိစနစ်ကအတွင်းစကားပြောဆိုရန်နည်းလမ်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတင်းမာမှုနွေဦးကိုဖိသောအခါကပဲ [ ... ] မှန်ပေမယ့်
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 16 2016 အပေါ်	• 16 မှတ်ချက်
ကျွန်မမကြာခဏ get မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: "? ဗဟိုကမ္ဘာကြီးအစိုးရမှားင်ကဘာလဲ" တစ်ခါတလေကတူတစ်ခုခုကဆက်ပြောသည်: "ယခုတစ်ကြိမ်ဦးဆောင်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သင်သည်လျှင်နေဆဲအသုံးဝင်သည်လိုအပျသူလည်းအများအပြားရိုးရှင်းတဲ့လူတွေနေဆဲရှိပါတယ် တူညီတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိ? "အခြေခံအားဖြင့်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မေးခွန်းများကို, သငျသညျဆိုသညျကားပေလိမ့်မည်။ [ ... ] ဒါက
nano နည်းပညာဒြပ်အစားအစာနှင့်မဖောက်ပြန်ခြင်းများအတွက် Google ရှာဖွေရေး
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	ဖေဖော်ဝါရီလ 27 2016 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
Google ကမသေခြင်း၎င်း၏ရှာပုံတော်အတွက်ထိပ်တန်း geneticist ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ Google ကဝေါဟာရကို "singular" မိတ်ဆက်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် 2045 ယင်း၏မသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပြောဆိုသောဒါမကြာခဏ transhumanist Ray Kurzweil ဖွငျ့ဖျောပွထားသထားပြီးအဖြစ်ကို 'လမ်းပြမြေပုံ' 'အပေါ်လုံးဝဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကငါပြီးသားသူတို့က DNA ကိုကုဒ်ကို reset တွေ့ပြီကြောင်းအစီရင်ခံ [ ... ]
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	ဖေဖော်ဝါရီလ 24 2016 အပေါ်	• 20 မှတ်ချက်
သင်ကသတိပြုမိကြသောအခါသင်တို့ပတ်လည်အရာအားလုံးပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကသာဖန်တီးသည်။ ဒါကတော်တော်လေးရဲရင့်ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤကြေညာချက်ကွမ်တမ်ရူပဗေဒ၏လယ်ပြင်တွင်သိပ္ပံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံသည်။ ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်မယုံဖို့ဦးဆောင်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအံ့သြစရာမှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွမ်တမ်ရူပဗေဒစမ်းသပ်မှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကြိမ်ရာပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပါပြီ။ [ ... ]
အဆိုပါ matrix ကိုအရေးကြီးပါတယ်, အရာအားလုံးက 'စိတျထဲတှငျအရပျကိုယူ
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 22 2015 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
"ဒီ matrix ကိုအရေးကြီးပါတယ်, အရာအားလုံးစိတ်ကိုနေရာယူ, ငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်များနှင့်စဉ်းစားသုံးသပ်ရကျိုးနပ်အတွေးကြားကြောင်းကိုကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ matrix ကိုကျော် Talking နှင့်အသင်းတော်ကို၎င်းလုံးဝအရေးမကြီးဖြစ်၏ စဉ်းစားကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အာဏာတည်ဆောက်ပုံပေါ်အရေးမကြီးဖြစ်၏ [ ... ] ကအတွေ့အကြုံမဆိုကြင်နာနေရာယူ
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 12 2015 အပေါ်	• 19 မှတ်ချက်
အရာအားလုံးတစ်ခုသာစီမံကိန်းထိုလူမှသာတတ်နိုင်သည်အဘယ်မှာရှိငါ့အကွမ်တမ်ရူပဗေဒ၏ရှင်းပြချက်နှငျ့ "နှစ်ချက်အလျားလိုက်အပေါက်စမ်းသပ်မှု" ၏အခြေခံပေါ်မှာလူတွေ (ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ), နိဂုံးငါသည်အသက်တစ်တွက်ချက်အမြင်ရှိသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ပေမယ့် hologram တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာပရောဂျက်အဖြစ် "အဖြစ်မှန်" ကိုလက်ခံရရှိတစ်ဦး [ ... ] ဖြစ်ပါတယ်
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	ဧပြီလ 23 2015 အပေါ်	• 46 မှတ်ချက်
အများဆုံးဘာသာတရားအတွက်ပေါင်းစပ်အကြောင်းကိုစကားပြောပါပြီ ", စိတ်, ဝိညာဉ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို။ " လူအများစုဟာထို့ကြောင့်သူတို့အားအသုံးအနှုန်းများ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ, ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အဘယ်အရာကိုယျခန်ဓာကိုသိနေချိန်တွင်ဖြစ်ကောင်းကပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုသတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတော်လေးခက်ခဲသည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် [ ... ] ဇီဝကွန်ပျူတာနှင့်အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမည်ပေးထားကြသည်
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	ဧပြီလ 16 2015 အပေါ်	•9မှတ်ချက်
"နေရောင်အောက်တွင်အရာအားလုံးညှိ၌ရှိ၏ တီးဝိုင်း Pink Floyd သူတို့ရဲ့သီချင်း '' Eclipse '' ဒီလိုသီဆိုအရာဖြစ်တယ်။ နေရောင်အောက်တွင်အရာရာကို "ညှိ၌တည်၏။ " ဖြစ်ပါတယ် သူတို့ကအားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ? ငါအစောပိုင်းကဆောင်းပါး (ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ) ဒါကြောင့်အပျနှံခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်ကတဖန် ပြန်. ရှိယနေ့မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ [ ... ] အရာအားလုံးကိုပါလျှင်
ဘယ်လိုသင် matrix ကိုကနေ disconnect မရှိပါသေးသငျသညျရှင်သန်?
အတွက် Filed NEW Insight	by မာတင် Vrijland	ဧပြီလ 16 2015 အပေါ်	•4မှတ်ချက်
စက်တင်ဘာလ 2014 ၌ငါလက်ခံရရှိ - ထို matrix ကိုအပေါ်မှာငါ့ဆောင်းပါး aanleidling မှ - အကြိမ်ပေါင်းများစွာအနှစ်သာရထဲမှာဖတ်သောမေးခွန်းတစ်ခုကို: "ဘယ်လို matrix ကိုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ကြပါနဲ့ကျွန်မနေဆဲ matrix ကိုအတွက်ရှင်သန်နိုင်" ဥပမာနောက်တစ်နေ့တစ်စုံတစ်ဦးရှိခဲ့ပါသည် မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးမွနျး [quote] ယခုတွင်ငါသည်အချို့သောအချိန်များအတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးပြီ [ ... ]